(76) – Megapixel Myth ဓါတ်ပုံ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ မှတ်စု (၇၆)
Pixels သို့မဟုတ် ပုံပြင်ထဲက ယုံ တမ်း စကားတစ်ခု
( The Megapixel Myth )
ကင်မရာ သစ် တစ်လုံး ကိုဈေး ကွက် ၌ ကြော်ညာ ရာ တွင် Pixels မည်ရွေ့ မည်မျှ ရှိသည်ကို ရှေ့တန်း တင်ကာကြော်ညာလေ့ ရှိပါသည်။ လူ အများ အာ ရုံ အစိုက်ဆုံး အချက် ဖြစ်သည့် Pixels များလေ ပုံထွက် ပြတ်သားလေ ဆိုသည့် အချက်ကို ရှေ့ တန်း တင်ကာ ကြော်ညာ ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းကာလ များတွင် Sensor ဇီး စေ့ လောက် အရွယ် သာ ရှိသည့် ကင်မရာ များပင် Pixel များစွာ ဖေါ်ပြ ကြော်ညာလာ ကြပါသည်။
ထိပ်တန်း စာရင်းဝင် ကင်မရာ များသည် ကင်မရာ ၏ Sensor အရွယ် အစား ၊ Sensor တည်ဆောက်ထားသည့် Technology ၊ ကင်မရာ Processor အား မောင်း နှင် မည့် အင်ဂျင် ၊ ကင်မရာ အား အသုံးပြုမည့် အနေအထား စသည် တို့ အပေါ် မူတည်ကာ Pixel မည်၍ မည်မျှထည့် ထားရမည်ကို စနစ် တကျ တွက်ချက်ကာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ပုံ ကောင်းတစ်ပုံ ထွက်လာစေရန် Pixels တစ်ခု ထည်း ကို သာ မဟုတ် ရှေ့တွင် ဖေါ်ပြ ခဲ့ သည့် အချက် အားလုံး နှင့် ချိတ် ဆက် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ အားဖြင့် Nikon Full Frame Camera များကို ကြည့်ပါက D 800, D 800E, D 810 တို့ သည် 36.3MP ဖြစ်ကာ Pro Line ၀င် D 3, D3S, တို့ သည် 12.1 MP, သာ ရှိသည်။ Nikon top of the line များ ဖြစ်ကြသည့် D4 သည် 16.2 MP, နောက်ဆုံးပေါ် Nikon Flagship ဖြစ်သည့် D4S သည်လည်း 16.2 MP သာ ရှိသည်ကို သတိပြု ရန် လိုပါမည်။
ထို့ ကြောင့် ပုံ တစ်ပုံ ကြည်လင်ပြတ်သား ပုံထွက် ကောင်းရေး အတွက် Pixels အနေနှင့် မည် သည့် အတိုင်း အတာ အထိ ဖေါ် ဆောင် နိုင်သည်။ အချုပ် အား ဖြင့် Pixel များရုံ မျှ နှင့် ပုံ ထွက် ကောင်း မှာ လား ဟူသော အချက် ကို သိလိုသဖြင့် ရှာဖွေ ဖတ်ရှု ရင်း နံမည်ကြီး ဓါတ်ပုံ ဆောင်းပါးရှင် Ken Rock Well ၏ “ The Megapixel Myth “ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ လိုက်ပါသည်။
Ken Rock Well သည် အမေရိကန် နိုင်ငံ မှ ဖြစ်ပါသည်။ ကင်မရာ နှင့် ဓါတ်ပုံ ဆိုင်ရာ ဝေဘန် သုံးသပ် ရေး များကို ရေးသားရာ တွင် အလွန် နံ မည်ကြီး သည့် ကမ္ဘာ ကျော် ပု ဂ္ဂိုလ် တစ် ဦးလည်း ဖြစ်ပါ သည်။
၄င်း၏ “ The Megapixel Myth “ ဆောင်းပါး မှာ ဆောင်းပါး ရှင် ၏ အာဘော်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ ဖြစ်စေကာမူ ဗဟုသု တ ရနိုင်ဘွယ်ရာ များ စွာ ပါသဖြင့် ဆီလျှော် အောင် မြန်မာဘာသာ သို့ ဘာသာ ပြန် ကာ ပြန် လည် မျှဝေ လိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက် တွင် ဖေါ် ပြရာ ၌ “ ကျွန်တော် “ ဟု သုံးစွဲ ခြင်း များပါဝင် လာပါက အဆိုပါ ကျွန်တော် ဆိုသည်မှာ Ken Rock Well ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ဖေါ်ပြ အပ်ပါသည်။
A photograph of sub-pixel display elements.
၁၉၉၁ ခု နှစ်လောက် တွင် ကျွန်တော် တို့ အများသုံး ဓါတ်ပုံ အရွယ် 4x6" (10x15cm) prints, even VGA (640 x 480 or 0.3MP) မှာ အတော် လုံလောက် သည့် အရွယ် ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဘာပြဿ နာမှလည်း မရှိခဲ့ ပါ။
သို့ သော် ၁၉၉၉ နှစ်လောက်တွင် 1.2 Mega Pixels,2Mega Pixels စသည်ဖြင့် ကင်မရာ များ ပေါ် လာသည်နှင့်အမျှ ပုံ ကြီးကြီး ချဲ့ သည့် ကိစ္စ တွေ လည်း ပေါ် လာပါသည်။ ယနေ့ ဆိုလျှင် ဈေး အပေါ ဆုံး ကင်မရာ သည်ပင်5or6MP ရှိနေကြပေပြီ။ ကောင်းပြီ အဆိုပါ ကင်မရာ များသည် လိုသည့် Picture Size အထိ ပုံ ကြီးချဲ့ ၍ ရပြီ လော - ဟု မေးလျှင် အဖြေက ရှင်းပါသည်။ ပုံ ကို သုံးပေ ( 1 m ) အရွယ် ချဲ့ လျှင် နောက်ဆုတ် ကြည့်ပါ ၊ Billboard Size ချဲ့ လျှင် ပေ ၁၀၀ လောက် နောက်ဆုတ်ကာ ကြည့်ပါ။6MP သည် ဤမျှ လောက် အကြည့်ခံ အောင် ဆောင်ရွက် ပေးပါလိမ့် မည်။
ပုံ တစ်ပုံ၏ ကြည်လင် ပြတ်သား မှု ( Sharpness and Clarity ) သည် Pixels အရေ အတွက်ထက် ဓါတ်ပုံ ရိုက်သူ၏ မိမိ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့်ပတ်သက်၍ နားလည် တတ်ကျွမ်း မှု ( Skill ) ပေါ် တွင် ပို၍ တည်နေပါသည်။ အကိုင် အတွက် အချိန် အဆ မသေသပ် လျှင် မည်မျှ Pixels များပါစေ ပုံ သည် Motion Blur ကဲ့သို့ သော အဖြစ် ကြောင့် ပြတ်သားမှု လျှော့ သွားပါ လိမ့် မည်။
Pixel အနည်း အများ ကြောင့် အသေးစိတ် ပေါ်လွင် မှု အနည်း အများ ကွာခြား မှု မရှိ မဟုတ် ၊ ရှိပါသည်။ သို့ ရာ တွင် ဥပမာ အားဖြင့်3MP ကင်မရာ နှင့်6MP ကင်မရာ တို့ ၏ ပုံ ထွက်များ၏ ပြန်သား မှု ကို ယှဉ်ကြည့် လျှင် အတော် ကြည့်မှ သာ လျှင် မြင် နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော် စမ်း သပ်ကြည့်ရာ တွင် 12 x 18" (30x50cm) အရွယ် လောက် ချဲ့ ကြည့် မှ သာ လျှင် ကွာခြား မှု ကို အတန် ငယ်သာ မြင်ရပါသည်။
New York Times သတင်းဌာန မှ David Pogue ကမူ သူ့ အနေနဲ့ ဘာမှ ကွာခြား တာမမြင်ရ၊ နှစ်ခု စလုံး အတူတူ ပင်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုပါသည်။ Joe Holmes ၏ Manhattan's Jen Bekman Gallery တွင် တစ်ပုံ ကို $ 650/- ဖြင့် ရောင်းချ ခဲ့သည့် limited-edition American Museum of Natural History Series 13 x 19" prints ပုံ များသည်6MP သာ ရှိသော Nikon D 70 ဖြင့် ရိုက် ထားသည့် ပုံ များသာ ဖြစ်သည်။
( အောက်၌ ဖေါ်ပြမည့် အကြောင်းအရာ များ တွင် Sharpness နှင့် Resolution ဆိုသည့် စကားရပ် နှစ်ခု ပါ လာ ပါမည်။ ထို့ ကြောင့် အဆိုပါ အချက် နှစ်ခု ကို ကြို ရှင်း ထားလိုပါသည်။ အကြမ်း ပြောရပါလျှင် နှစ်ခု စလုံးသည် ကြည့်လင် ပြတ်သား မှု နှင့် ဆိုင်ပါသည်။ သို့ သော် မတူကြပါ။
“ Resolution သည် ကင်မရာ တွင် တပ် ထားသည့် Lens အနေ မှ ၀င်လာ သော Light Signal ကို ကင်မရာ Sensor စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် Pixels အနေနှင့် Image Height and Width အတွင်း Horizontal Data Line Pair မည်မျှ ဖေါ်ဆောင် ပေးနိုင် သနည်း ဆိုသည် ကို ဆိုလို ပါသည်။ Total No. of Pixels နှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိပါ။
Sharpness မှာ မူ ကင်မရာ တွင် တပ်ဆင်ထားသော Lens, Image Processing, Anti-aliasing Filter and other Technologies စသည့် အချက် များ အားလုံး က Sensor အား အခြေအနေ အမျိုးမျိုး သော Sharpness ဖြစ်လာစေအောင် ပုံ ဖေါ် ခိုင်း ရာ မှ ပေါ် ထွက် လာခြင်း ဖြစ်သည်။ Pixel များတိုင်း Sharpness ရှိလာ မည်ဟု Pixel ဆိုသည့် အချက် တစ်ချက် ထည်း အပေါ် တွင် သာ မှီတည် တွက် ဆ၍မရပါ။
ထို့ ကြောင့် ကင်မရာ တစ်လုံး Lens တစ်ခု ထည်း နှင့် ရိုက်စေကာ မူ အခြေ အနေ ကွာ ခြားမှု ပေါ် တည်ကာ ပုံ တစ်ပုံ နှင့် တစ်ပုံ ၏ Sharpness သည်လည်း ကွာခြား ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အစဉ် ကြားရလေ့ ရှိသည့် “ ငါ့ ကင်မရာ က မင်း ကင်မရာ ထက် Megapixel ပို များတယ် “ ဆိုသည့် ဂုဏ်ယူ ငြင်း ခုံနေမှု သည် အတော် ရူး မိုက်မှု ပင် ဖြစ်ပေ တော့သည်။
Ref : - “ PhotoFocus “ Stottbourbe - Education and inspiration for visual storyteller.
သို့ ဖြစ်ပါ၍ Resolution နှင့် Sharpness တို့ ကို မြန်မာဘာသာ မပြန်ဘဲ မူရင်း အတိုင်း ပင် သုံး သွားပါမည်။ ဘာသာ ပြန်ကာ မှ ပို ရှုပ် သွား နိုင် သည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ )
Sharpness သည် Image quality နှင့် များစွာ မဆိုင် သကဲ့ သို့ Resolution သည်လည်း Sharpness နှင့် များစွာ သက် ဆိုင် ခြင်း မရှိလှပါ။
ပုံ တစ်ပုံ ၏ အရောင် နှင့် အသွေး အရောင် ချယ်သမှု ( Colour and Tone ) က များစွာ ပို၍ အဓိကကျ ပါသည်။
ပုံ တစ်ပုံ ဖြစ်လာစေရန် Little Dot ကလေးများက စုစည်း ကာ ပုံဖေါ် ပေးရသည်။ Pixel ဆိုသည်မှာ အဆိုပါ Picture Element လေး များကို ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Element လေးများ စု စည်း လိုက် ခြင်း ဖြင့် ရုပ်ပုံ တစ်ပုံ ဖြစ်လာသည်။
ယင်း တို့ သည် Sensor ပေါ်တွင် အလျှား လိုက် နှင့် ဒေါင်လိုက် စီ နေကြသည်။ ဥပမာ အား ဖြင့်3MP ကင်မရာတစ်လုံး တွင် 2,048 (horizontal) အလျှား လိုက် x 1,536 (vertical) ဒေါင်လိုက် pixels, ( အလျှား လိုက် X ဒေါင် လိုက် ) = 3,145,728 pixels။ ထို့ ကြောင့် အဆိုပါ Pixel Count ကို မူတည်၍3Mega Pixels ကင်မရာ ဟု ခေါ် ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ5MP နှင့် 8 MP ကဲ့သို့ တော် ရုံတန်ရုံ Pixel Count ကွာခြားမှု မျိုး တွင် ပုံထွက် ကွာ ခြားမှု ကိုသိသာစွာ မြင် နိုင်ရန် ခက်သည်။
အထက်ပါ ပုံ မှာ Pixel ဖန်တည်း ပေးသည့် Photosite များကို Sensor ပေါ်တွင် အလျှားလိုက် နှင့် ဒေါင်လိုက် စီထားသည့် နမူနာပုံ ဖြစ်သည်။
Image Resolution သည် Image အတွင်း အလျှားလိုက် ( Horizontally ) သို့ မဟုတ် ဒေါင်လိုက် (Vertically ) အဖြောင့် လိုင်း အတိုင်း ဖြန့် ကျက် သိမ်းဆည်း ထား သည့် Pixels အရေအတွက် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ Digital Camera များ အနက်3MP ကင်မရာ ၏ အလျှား လိုက် ( Horizontal ) ဖြန့် ကျက် ထားသည့် Pixel ပမာဏ မှာ 2048 Pixels ဖြစ်ပြီး 14 MP ကင်မရာ အလျှား လိုက် ( Horizontal ) ဖြန့် ကျက် ထားသည့် Pixel ပမာဏ မှာ 4500 Pixels ဖြစ်သည်။ ပုံ သည် ဘေး တိုက် အရှည် ဖြစ်သောကြောင့် ဒေါင်လိုက်( Vertical ) ရှိနေသည့် Pixels အရေ အတွက် မှာ အလျှား လိုက် ( Horizontal ) ထက် နည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
Pixels Count ကို Megapixels ဖြင့် ဖေါ်ပြသည်။ ယင်း မှာ Image Area ရှိ Horizontal Pixels ကို Vertical Pixels ဖြင့် မြှောက်ထားသည့် ရလာဒ် ဖြစ်သည်။ မြှောက်လာဒ် မှာ Square footage ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဂဏန်း ပမာဏ မှာ များနေသည်။ စင်စစ် အားဖြင့် Pixels Count ကို နှစ်ဆ တိုး လိုက်မှ Real Linear Resolution သည် 40%သာ တိုးလာသည်။ 5MP မှ နေ၍ 8 MP မျှ လောက် တိုး လာသည့် ပမာဏ သည် မသိသာလောက် သည့် ပမာဏ မျှသည် ဖြစ် သည်။
ပုံ တစ်ပုံ ကို ရိုက်ပြီးပါက ကင်မရာ Screen ဖြင့် ကြည့်ရုံ မျှ မက နောက်ဆုံး အဆင့်တွင် Computer Screen ပေါ် တွင် ကြည့်ရပြန်သည်။ အတော် များများ သော Computer Screen များသည် 1,024 x 768 pixels မျှ ရှိကြသည်။ ၁၀ လက်မ Screen ဆိုပါက 1,024 / 10 = 102.4 DPI ဖြစ်လာပေလိမ့် မည်။ Screen ကြီးလာ ပါက Pixel များလာမည်။ 22” CRT သည် 1,600 x 1,200 pixels ရှိ ပြီး Viewing Area သည် 16 X 12 “ ဖြစ်သည်။ ပုံကို မြင် ရသည့် အနေအထားမှာ Computer Screen အရည် အသွေး နှင့် လည်း ဆိုင်ပြန်သည်။
များသော ဖြင့် printer အများစု ၏ Print အရည်အသွေးသည် 200 - 300 pixels per inch (PPI or DPI, dots per inch) ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့် မည်သို့ ထိပ်တန်း ပုံ ကို မဆို အဆိုပါ Printer ဖြင့် Print ထုတ်ပါက ထို ထက် ပို မကောင်း နိုင်။ Inkjet Printer’s Nozzel Size သည် အကြမ်း အားဖြင့် 2880 DPI သာ ရှိသည်။ ပုံကို မြင် ရသည့် အနေအထားမှာ Printer အရည် အသွေး ပေါ်လည်း တည် နေပြန်သည်။
ထို့ကြောင့် ပုံ တစ်ပုံ ကြည်လင် ပြတ်သား မှု ဆိုသည် မှာ Pixels တစ်ခု ထည်း ပေါ် တင်သာမက ဓါတ်ပုံ ရိုက်သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှု ၊ Lens, Processing Engine, Anti-aliasing Filter တို့ အပါအ၀င် အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အချက်များ အားလုံး အပေါ် တွင် လည်း တည်နေသည်။
The Myth (ယုံတမ်း စကား)
ကင်မရာ ထုတ်လုပ်သူများသည် ( Customer ) ၀ယ်သူ များ အား သွေးဆောင် ရန် အတွက် ဒဏ္ဌာရီ ဆန်ဆန် ယုံတမ်း စကားများ ဖြင့် Pixel ကို ရှေ့တန်း တင် ကာ ကြော် ညာ လာကြသည်။ ကင်မရာ ထုတ်လုပ် သူများက Linear Resolution အနည်းငယ် လေး တိုး လိုက် ရုံ မျှ ဖြင့် Pixels များစွာ ရှိလာ ပြီး ကင်မရာ ပုံ တွက် အလွန် ကောင်းသွားသည် ဆိုသည့် သဘော မျိုး ဖြင့် ကြော်ညာ ကြသည်။
အမှန်မှာ Linear Resolution ကို အလျှားလိုက် တွင် ဖြစ်စေ သို့ မဟုတ် ဒေါင်လိုက် တွင် ဖြစ်စေ မမြင်သာ နိုင်လောက်သည့် Resolution 40% မျှ တိုး ရန် အတွက် (Square footage ) Pixels Count ကို နှစ်ဆ မျှ တိုးရန်လိုသည်။ Pixels တော်ရုံ တိုး လိုက်ခြင်း အတွက် ပုံ ထွက် သည် ပို၍ သိသာ စွာ ပြတ်သား လာမည် မဟုတ်ပေ။ သို့ သော် ကင်မရာ ထုတ်လုပ်သူများက မပြော ပလောက်သည့် နည်း ပညာ ဆိုင်ရာ တိုးမြှင့် မှု လေး တစ်ခုမျှကို လုပ်ကာ အရည် အသွေး တအား ကောင်း သွားပြီ ဟု ကြွား လုံးထုတ်ကာ ကြောညာ ကြသည်။
ယင်းနောက် လက်ရှိ သုံးနေသည့် ကင်မရာ များ မှာ သုံး မဖြစ်တော့ လွှင့် ပစ်ရတော့ မည် ကဲ့ သို့ ဖြစ်အောင် ကြော်ညာ ကြသည်။ စင်စစ် အားဖြင့် တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် တိုးတက် ထုတ်လုပ်လာကြသည့် ကင်မရာ များ၏ အရည် အသွေးသည် တစ်ခု နှင့် တစ်ခု သည် များစွာ ထူးခြားမှု မရှိလှ ဘဲ မသိမသာ မျှ သာ တိုးတက် မှု ရှိသည် ကို သေခြာ စွာ စစ်ကြည့် လျှင် တွေ့ နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ အကယ် ၍ ကင်မရာ ထုတ်လုပ် သူများ အနေနှင့် Linear Resolution ကို Film Size ကဲ့သို့ နှစ်ဆ မျှ တိုးတက် ထုပ် လုပ် နိုင်ပြီ ဆိုလျှင် မူ ထူးခြားသည့် တိုးတက် မှု ဟု ဆိုနိုင် မည် ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ (Quadrupling the Pixels ) လက်ရှိ ထိပ်ပ်ိုင်း ရှိ Pixels ကို လေး ဆတိုး ကာ ထုတ်လုပ် ရ မည်ကို ဆိုလိုသည်။ ထိုအခါ တွင် ယင်း Pixels ပမာဏ ကို ထိန်းကြောင်း မောင်း နှင် ရမည့် အဆင့်ဆင့် သော တိုးတက် သည့် နည်းပညာ ပံ့ ပိုး မှု များလည်း လိုလာ ပေလိမ့် မည်။ Pixel ပမာဏ ကို သာမန် နှစ်ဆ မျှ တိုးရုံ မျှ နှင့် မူ မည်သို့ မှ သိသာစွာ ထူးခြားလာမည် မဟုတ်။
အခြား သိထားရမည့် တစ်ရပ်မှာ Signal and Noise တို့ ဖြစ်သည်။ အလွယ် ဆုံးပြောရလျှင် Sensor သေးသေး ပေါ်တွင် Pixels များ နေသဖြင့် Pixel Size ကလည်း သေးလာရာ Pixel ၏ ခြေခံ ဖြစ်သော Photosite သေး လာသည် နှင့် အမျှ ၀င်လာသည့် Light Signal ဖြတ်သန်း မှု သည် လျှောလျှော လျှူ လျှူ မဖြစ်ဘဲ နှောင့်နှေး အဟန့် အတားဖြစ် စေလာသည်။
ဥပမာ ပေးရသော် ရေ ကာတာကြီး တစ်ခု မှ ရေ ကို ရေထုတ် ပြွန် သေးသေး လေးများ နှင့် ထုတ် နေသကဲ့ သို့ ဖြစ်ပေသည်။ Sensor Size ကြီးကြီး နှင့်Photosite ကြီးကြီး များ မှာမူ ရေ ကာတာကြီး တစ်ခု မှ ရေ အား ရေထုတ် ပြွန် ကြီးကြီး များ နှင့် ရေ ကို အရှိန် အဟုန် နှင့် လွှတ် ထုတ် လိုက် သည်နှင့် တူသည်။
ထို့ အတူပင် Light Signal သည် Photosite သေးသေး လေး များ အတွင်း မှ ခက်ရာ ခက်ဆစ် ဖြတ်သန်း ရသည့်အတွက် အညစ်အကြေး ဟု ဆိုသည့် Noise များ တင်ကျန် ရစ်ခဲ့ သည်။ Noise အဖြစ်များသည်။ Light Signal သည် ရေပြွန် ကြီးများ နှင့်တူသည့် Photosite ကြီး များ အတွင်း သို့ မူ အခက်အခဲ အနှောက် အယှက် မရှိဖြတ် သန်း နိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် အညစ် အကြေး များ အားလုံး လွယ် ကူစွာ မြောပါ သွားသည်။ အညစ်အကြေး နှင့် တူသည့် Noise များလည်း မြော ပါသွားသဖြင့် Noise အဖြစ်နည်း သည်။ Pixel နည်း သည့် Sensor Size ကြီး များရှိ Photosite များသည် ကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် Light Signal ဖြတ်သန်းရ သွက်လက်သည်။ သို့ နှင့် Noise လည်း နည်းသည်။
ယခု မူ ယမန် နှစ်က 10MP ထည့် ထားသည့် Sensor သေးသေး လေး အတွင်း ယခုနှစ်တွင် 16 MP ထည့်ကာ Pixel များသည် ဆို၍ ကြော်ညာ ပြန်သည်။ ဤ သို့ ဖြင့် ပုံ ထွက် မည် သို့ မျှ ပို ကောင်း လာနိုင်ဘွယ်ရာ မရှိ။
သို့ သော် Pixel အစွဲ သည် လူ တိုင်း တွင် ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ လူ တွေက ကင်မရာ ဆိုင်ရာ နည်းပညာ တွင် ကိန်း တစ်လုံး တိုး လာရုံ မျှ ဖြင့် တစ်ခုခု တော့ ပိုကောင်းလာ မှာ ဘဲ ဟု ယုံကြည့်နေကြ ဆဲ ဖြစ်သည်။
Pixel နည်း သော ကင်မရာ များ အနေနှင့် Pixels များသည့် ကင်မရာ များ ထက် များစွာ သာလွန်သည့် ပုံကောင်း များ စွာထုတ် ပေး နေသည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ Pixel ပမာဏ ကို ရှေ့ တန်း တင်ကာ ကြော်ညာ ခြင်း မှာ ဒဏ္ဌာရီ ဆန်သည့် ယုံတန်း စကား ဆိုသည်ကို မမေ့ သင့်ပါ။
အောက် ပါ ပုံ များကို ကျွန်တော် Pixel အတော် နိမ့် သည့်3MP ကင်မရာ ဖြင့် ရိုက်ထား ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံ - (၁) တွင် အနီရောင် လေးထောင့် ချယ်ထားသည့် နေရာ ကို Crop လုပ်ပါသည်။ Pixel များစွာ ဆုံး ရှုံး သွားပြီးနောက် Crop လုပ်ထား သော ပုံ - (၂) ရလာသည်။ ပုံ များ ၏ အခြေအနေ မဆိုးလှ။ ကျွန်တော် ဆိုလိုသည်မှာ ဤ အဆင့်မျှသေ ပုံ ကို ထိုမျှလောက်သော3MP ကင်မရာ ဖြင့် ရိုက်ကာ Crop လုပ် နိုင်သည်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံ - (၂)
အောက်ပါ ပုံ - (၃) မှာ မူရင်း ပုံ နှင့် Crop လုပ်ထားသည့် ပုံ နှစ်ပုံ ကို ယှဉ် ပြထားသည့် ပုံ ဖြစ်သည်။
ပုံ - (၃)
3 MP uncropped Cropped as per red rectangle
ကင်မရာ ထုတ်လုပ် ရောင်ချသူများ အနေနှင့်4MP နှင့် 6MP ကဲ့ သို့ Pixel Count 50% ကွာ သည့် ပုံ အမျိုး မျိုး (၄) ပုံ ခန့် ကို ပြ လိမ့်မည်။ အထက်တွင် ဖေါ် ပြ ခဲ့သည့် အတိုင်း Pixel Count သည် Square ဖြစ်သောကြာင့် အမှန် Pixel Size or Pitch ကွာခြား မှု မှာ 25% သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်း ရောင်းချသူများ အနေနှင့် သူတို့ ၏ ပစ္စည်း များကို ဈေးကွက် တွင် ကြော်ညာ ရာ ၌ သုံးစွဲ သူ များကို အရူး မလုပ်ဘဲ ရိုးသား မှန်ကန်စွာ ကြော်ညာ ရန် အတွက် စည်းမျဉ်း ဥပဒေ ( Rules ) ထုတ်ရန် လိုနေပြီဟု ထင်သည်။
ပုံ တစ်ပုံ ၏ ကြည်လင် ပြတ်သားမှု ( Clarity ) သည် ကင်မရာ Pixel အရေ အတွက် ထက် သင် မည်ကဲ့ သို့ ရိုက် သနည်း ဆိုသည့် အပေါ် တွင် ပို၍ တည်နေ သည် - “Image clarity is more dependent on how you shot the photo than on the number of megapixels. “ ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
3 MP ကင်မရာ ဖြင့် သေခြာ စွာ Focus ပြတ် အောင် ရိုက်ထားသည့် ပုံသည် Focus အတန် အသင့် လွဲ နေသော 12 MP ကင်မရာ ပုံ ထက် များစွာ သာ သည်။
ယနေ့ ခေတ် မည်သို့ သော Digital Camera မဆို သေခြာ စွာ ရိုက်ထားပါက ထိုပုံ ကို နံရံကပ် ပုံကြီး မဟုတ် မူဘဲ သာမန် သုံး မည် သို့ သော အရွယ် မဆို Print လုပ်နိုင်သည်။ ပြတ်သားစွာ မြင် နိုင် သည်။ 6MP ကင်မရာ ဖြင့် ရိုက်သည် ပုံ ကို 30” ( 75CM) အရွယ် အထိ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ချဲ့ နိုင်သည်။ သာမန် အား ဖြင့် “ သင့် အနေ နှင့် အနေနဲ့ ဤ မျှ သော အရွယ်ရှိ သော ပုံ အရွယ် အစားကို ဘယ် နှစ်ကြိမ် ထုတ်ဘူး သလဲ “ ဟု မေးကြည့်ပါရစေ။
ပုံ မှန် အား ဖြင့် 300 DPI သည် အလွန် ပြတ်သားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ အတိုင်း တွက်ချက် ကြည့် နိုင်ပါသည် : -
· Long print dimension in inches =4x (square root of megapixels)
· Long print dimension in centimeters = 10 x (square root of megapixels)
· For example, the square root of four (megapixels) is two.
·4x (two) is eight.
· Thus the biggest print you can make without losing sharpness as seen throughamagnifier froma4MP camera is6x 8" (15x20cm).
· Fromasixteen MP camera likewise you could go to 12 x 16" (30x45cm), and still look at the print throughamagnifier.
အထက်ပါ တွက် နည်း အရ 4MP ကင်မရာ မှ ပုံ ကို ပြတ်သားမှု မလျှော့ကျ စေဘဲ အကြီးဆုံး ချဲု့ နိုင်သည့် အရွယ် မှာ6x 8" (15x20cm) ဖြစ်ပြီး 16 MP ကင်မရာ ဖြင့် မူ ပြတ်သားမှု မလျှော့ကျ စေဘဲ 12 x 16" (30x45cm) အထိ ချဲ့ နိုင်သည်။ Resolution မှာ မူ ကြည့် သူ နှင့် ပုံ တို့ ၏ အကွာ အဝေး ပေါ် တွင် တည်သည်။
Picture Size ကြီးလာ သည် နှင့်အမျှ Resolution ပိုကောင်း ရန် လိုသည် မှာ မှန်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် ပုံ တစ်ပုံ မည် မျှ လောက်ကောင်း သည် ဆိုသည့် အချက် အတွက် Sharpness မှာ အတော် အသင့် သာ အကြုံးဝင်သည်။ ပုံ တစ်ပုံ အတွက် Technically ပို၍ အရေး ကြီးသည် မှာ အရောင်မှန်ကန် ရေး နှင့် အမှန် တကယ် ပြတ် သား မှု ဟုတ် မဟုတ် ကို စိစစ် ရန် ဖြစ်သည်။
အချို့ သော Digital ကင်မရာ များသည် Monitr Screen တွင် ပို၍ ပြတ် သား သယောင် ဖြစ်အောင် “ very artificial halos and Sloppy sharpening around “ ထည့် ထားပေးခြင်း အား ဖြင့် ပြင် ဆင်ထားကြသည်။ စင်စစ် အားဖြင့် ပုံ၏ အမှန် တကယ် ပြတ်သား မှု မဟုတ် သည် ကို သတိပြု ရမည် ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံ ကို သာမန် ကြည့် သူများ အနေနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း မှသာ ကြည့် ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံ ကြီးလေ ဝေး ဝေး မှ ကြည့်လေ ဖြစ်သည်။ တော်ရုံ မည် သူမျှ အနီးကပ် ကာ ပြူးပြဲ ကြည့်ကြသည် မဟုတ်။6MP ကင်မရာ လောက်ဆိုလျှင်ပင် အတော် ကောင်းသည့် 20 x 30” ပုံ ရ နိုင် သည်။
ဓါတ်ပုံ ကို ကြည့် သည်မှာ Art အနုပညာ ကို သာ ခံ စားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် အနေနှင်မူ ပုံ အကြီးကြီးချဲ့ ဘို့ လိုလျှင်4x 5” Film ကင်မရာ နှင့် ရိုက် သည်ကို ပို ၍ ကြိုက်သည်။ Portrait ရိုက် ရန် အတွက် မူ ပြတ်သားမှု ထက် ညက် ညော သည့် ကင်မရာ Smoothing of Digital Camera ကို ပို ကြိုက်သည်။
ကျွန် တော် သည် Colour Image ကဲ့သို့ Sharpness များစွာ မလို လှသော Black and White 12 x 18” ပုံ များကို3to6MP ကင်မရာ များနှင့်သာ ရိုက်သည်။ များစွာ ကောင်း မွန် သည့် ပုံ များ ဖြစ်ကြသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ တွင် ကြည့်လင် ပြတ်သားမှု ရှိရန်မှာ လည်း လိုအပ် ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သို့ သော် ၊ ယင်း အချက် ကို Pixel များရုံ မျှ နှင့် ဖေါ်ဆောင် ၍ မရ သည်ကို သတိပြု ရန် လိုသည်။
“ The Megapixel Myth “ ဆောင်းပါး ရှင် KenRockWell.
( အထက်ပါ ဘာသာပြန် မှတ်စု၏ အစ Introduction အပိုင်းမှ နောက်ဆုံး Conclusion အပိုင်း အထိ သည် ဆောင်းပါးရှင် KenRockWell ၏ အာဘော် ဖြစ်ပါသည်။ )
Posted by Soe Hlaing at 08:08
ko3September 2014 at 08:46
(Y) Thanks Sỉr
tin aung moe6April 2015 at 20:55
သိပ်‌‌ကောင်းတယ်‌..fb မှာ ဗဟုသုတ အလို့ ငှါ ‌ဝေမျှပါရ‌စေ
wei. Naing Oo 22 July 2017 at 21:10
Aung Thu 23 July 2017 at 07:09
ဗဟုသုတ အများကြီးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
(76) – Megapixel Myth ...
(77) – Abstracts Photography ...